Unezifiso ezinhle | News24
UMxolisi Cyril Mavundla ongu-Dj waseGamalakheisithombe: sithunyelwe
USEZAKHELE udumo kwezomculo u-DJ wohlobo lomculo we-Deep House uMnuz Mxolisi Cyril Mavundla owaziwa ngelika ‘DJ Cyril’ wase Gamalakhe.
U-DJ Cyril uthe uthandolwakhe lomculo lwaqala esemncane ngesikhathi efunda emabangeni aphakeme eGaleni High School eGamalakhe.
Uqhube izifundo zakhe zikamatikuletsheni e-Intec College.
“Ngizibona nami ngelinye ilanga ngisezingeni lika DJ Tira ongu-Dj nomsunguli we-Afrotainment Studios. U-DJ Tira usephumelele kwezomculo. Ayikho into enzima uma ukhuthele futhi uyazi into oyifunayo. Nami ngizibona ngiphumelela kwezomculo,” kusho yena.
Uthe unesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe nebhizinisi lakhe lo mculo.
“Ngifisa ukuthi ngelinye ilanga ngizenzele owami umculo ngibe nebhizinisi ukuze ngifukule o-Dj abasafufusa ngibalekelele ukuthi beveze ithalente labo njengoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili.”
U-DJ Cyril usezamile ukulandela ezinyathelweni zika saziwayo u-Dj Tira njengoba wasungula inkampani ebizwa ngokuthi yi-Gigs 4 Africa ebambisene nomngani wakhe uMnuzThulani Magubani ngo-2015.
“Le nkampani sayiqala ngenhloso yokubolekisa nge-sound kubalwa ama-speaker, ama-microphone nezinsimbi emcimbini eyahlukene emphakathini futhi siba nezinhlelo lapho siqeqesha khona o-DJ.
“Emva kwesikhathi kwaphoqeleka ukuba ngiyiqhube ngedwa lenkampani ngenxa yokuthi uMnuz Magubane waye banjwe umsebenzi awenzayo.
Kuyimanje isakhona le nkampani futhi iyathuthuka
“Le nkampani ibe nohlelo lokuqeqesha o-Dj kanti sebebaningi abafundiswe yile nkampani.
Mukhulu umehluko esiwenzile yize kwakunzima ukuthola umsebenzi kepha manje uMasipala usuyasiqasha emicimbini”
Uthe unesifiso sokuthi i-Gigs for Africa ibeithuthuke ngendlela eyisimanga.
Uqhube wathi uzimisele ukuthi asebenzisane nomphakathi njengoba umsebenzi wakhe ewuqhuba eGamalakhe nakwezinye izindawo uma eqashiwe.
U-DJ Cyril uvamise ukudla eKasified Eksperience njalo ngama Sonto.
Uthe abafisa ukwazi kabanzi ngaye noma ngenkampani yakhe i-Gigs for Africa bengaxhumana naye ekhasini lakhe ku-Facebook elithi:Cyril Mxolisi Mavundla, ele nkampani lona lithi: Gigs 4 Africa noma kwi-Instagram ekhasini elithi: mavundlacyril.
Abantu bengakwazi ukuthumela umyalezo ngekheli le email elithi: mavundlamc0@gmail.com noma beshayele inombolo yocingo ethi:
076 157 3599 noma 071 847 3575.